Wzọ Technologyzọ 7 Nkà na Cozọ Nwere Ike roy bibie Yourdị Gị | Martech Zone
Wzọ Technologyzọ 7 Nkà na uldzọ Nwere Ike Dest bibie Ahịa Gị
Fraịde, Ọgọstụ 23, 2019 Tọzdee, Eprel 1, 2021 Douglas Karr
Izu a, Anọ m na saịtị ahụ na-eme ihe ntanetị ahịa nke dijitalụ maka akara ụwa. The ogbako ahụ bụ na facilitated m na ngalaba-mepụtara na akụkụ na Mahadum Bekee na onye nkụzi dị ịtụnanya nke oge niile n’ime nzukọ.
Mgbe anyị rutere na ngalaba Martech Stack nke ikpo okwu iji kụziere ndị ọrụ na teknụzụ teknụzụ n'ime nzukọ ahụ, enwere m ntụpọ na njikọta nke nyiwe. Ọ pụtaghị dị ka ụlọ ọrụ Martech gị kwesịrị ekwesị nke akụkụ anọ dị n'akụkụ aka nri, nyiwe ụlọ ọrụ. Ọ bụ ngwakọta nke klas ụwa, nyiwe na-emeghe, ngwa ọdịnala, na ọbụlagodi ndị mmekọ ụlọ ọrụ.
Companylọ ọrụ ahụ wuru Martech Stack ha n'ebumnuche iji hụ na ọ nwere ike izipu ozi ziri ezi na atụmanya ziri ezi ma ọ bụ ndị ahịa n'oge kwesịrị ekwesị. All iberibe dị na ebe… ụfọdụ seamlessly ike na ndị ọzọ chọrọ ntuziaka Filiks… ma onye ọ bụla nke ọma ahọpụtara iji hụ na nnabata mbipụta, nche nchegbu, na kacha mmetụta ka n'ozuzu ahịa mkpa.
N'ime ogbako a, ewepụtara Martech Stack ikpeazụ nye ndị ọrụ. Ma, n'ụzọ dị mma, egosighi ọtụtụ ozi gbasara ihe ike nke ikpo okwu ọ bụla bụ ma ọ bụ otu esi eji ya.
N'ihi na ndị isi ụlọ ọrụ azụmaahịa chọrọ ka ahịa ya, mgbasa ozi ya, ahịa ya na ndị otu ahụmịhe ndị ahịa lekwasịrị anya na ahụmahụ ahịa, wee nweta teknụzụ iji nyefee ahụmịhe ahụ. Ọ dị mkpa ịghara ilekwasị anya n'ihe nwere ike a ga-eji teknụzụ mee… mana ilekwasị anya na ihe ekwesịrị ime ma ọ bụ na teknụzụ dị. Ọbụna ha kwenyere na e nwere mpempe akwụkwọ na nchịkọta ndị a na-ejighị maka atụmatụ ndị a na-amakarị.
Companylọ ọrụ ahụ jiri mkpirisi aha, POST, maka usoro ahia ahia ya:
ndị mmadụ - Chọpụta ndị lekwasịrị anya na mbọ a.
Ebumnobi - Kọwaa ebumnuche ma ọ bụ nsonaazụ ha na-achọ iji nweta mbọ ahịa.
Strategy - Kọwaa ọwa, ndị na-ajụ ase, mgbasa ozi, na njem ị ga-etinye na ebumnuche ahụ iji ruo ebumnuche ndị ahụ.
Technology - Chọpụta teknụzụ nwere ike inye aka nyocha ndị mmadụ, tụọ ebumnobi, ma tinye usoro a.
Nkà na ụzụ ọ na-emebi ụdị gị?
Teknụzụ anaghị emebi akara onye ahịa a n'ihi na ha ebutela ya ụzọ kwesịrị ekwesị. A na-enyocha usoro, nsogbu, mmefu ego, akụrụngwa, ọzụzụ, nchekwa, na nnabata tupu a na-ahọrọ teknụzụ. Ahụghị teknụzụ as azịza ya, a na-ahụ ya dị ka ngwa ọrụ dị mkpa iji rụọ ọrụ nke ọma ma nyefee ya.
Mana nke ahụ abụghị ihe m na-ahụ na ụlọ ọrụ ọ bụla. Ndị a bụ ụfọdụ ụzọ m na-ahụ na teknụzụ na-emetụta ahụike nke ụdị ụfọdụ.
Apps - Ndị ahịa achọghị iso ndị azụmahịa na-emekọrịta ihe. Otu ihe atụ bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ego. Ndị ahịa achọghị ịgwa onye ndụmọdụ ego, ụlọ akụ, ma ọ bụ onye na-ere ahịa mkpuchi mkpuchi… naanị ihe ha chọrọ bụ ezigbo ngwa nke dị mfe iji ma nwee atụmatụ niile ha chọrọ. Mgbe ngwa dị oke mkpa, ọ dị mkpa ịghọta na nke a emebi mmekọrịta mmadụ na ụdị gị. Companylọ ọrụ gị ga-arụ ọrụ okpukpu abụọ karịa ka gị na ndị ahịa a nwee mmekọrịta site na ndị na-ajụ ase ha na-ajụ. Ndị ụlọ ọrụ na-eji ngwa iji dochie mmekọrịta maka arụmọrụ ọnụahịa na-ahapụkwa akara ha n'ihe egwu maka mgbe ndị asọmpi ahụ wepụtara ngwa ka mma, dị mfe. Ngwa bụ ihe dị mkpa, mana ụlọ ọrụ ga-ahụrịrị na ha na-etinye mgbalị ndị ọzọ gbara ya gburugburu iji kụziere, nyere aka, ma kwurịta okwu nke ọma na ndị ọrụ nke ngwa ha. Ngwa ahụ ezughi!
Bots - Ọ bụrụ n ’ị na-achọ ịgbanwee usoro mmeghachi omume akpaaka dị ka mmekọrịta mmadụ na ibe gị, ị na-etinye akara gị n’ihe egwu dị egwu. Dika bots rutere na ewu ewu, etinyere m ha maka otutu ndi ahia… ma gbaghachita ngwa ngwa ma obu gbanwee ihe ha. Nsogbu bụ ndị ọrụ mbụ chere na ha na mmadụ na-ekwu okwu. Mgbe ha chọpụtara site na mmejọ ma ọ bụ ihie ụzọ na ọ bụ bot, ọ bụghị naanị na ha nwere nkụda mmụọ, iwe were ha nke ukwuu. Ọ dị ha ka hà ghọrọ aghụghọ. Ugbu a, mgbe m na-enyere ndị ahịa aka itinye bots, anyị na-ahụ na ndị ahịa maara nke ọma na ha na-agwa onye na-ejere ya ozi akpaaka… na anyị na-enye ha ụzọ gafere ha ozugbo na ezigbo mmadụ.
email - Onye ahịa ọzọ m na-arụ ọrụ haziri ma mepụta usoro dị mgbagwoju anya ebe ha zụtara ndepụta ma nyefee ọtụtụ puku ozi ịntanetị ezubere iche maka ndị ahịa. Ọ na-eji amamihe agafere usoro sistemụ iji hụ na ozi ndị ahụ mere na igbe nnabata ha. Mgbe ha gwara m ọtụtụ iri puku ozi ha na-ezipụ kwa izu, enweghị m ike imechi ọnụ m. Ajụrụ m ka mbọ SPAM na-agba. O wutere ha na ebubo ahụ n'ihi na ha na-anya isi na mbọ a mana ha kwetara na o buteghị otu ụzọ. M kpaliri ha ka ha mechie ya ozugbo ma anyị bugara usoro ahụ na usoro inbound siri ike nke na-ewepụta ụzọ ruru eru nke na-aga nke ọma site na njem ndị ahịa. Ruo taa, anyị enweghị ụzọ isi mara ole ndị ahịa ha nwere ike ịla n'iyi site na ịgha ụgha na ha. Izi ozi dị ọnụ ala, yabụ a na-anwa ụdị maka izipu ozi na ọtụtụ ozi. A naghị achọpụta ihe na-esi na ya pụta na dollar na cents. Akwụsịrị m ịzụ ahịa na ọtụtụ ụdị nke na-eme ka ọ ghara ịchọta m.
Amamịghe echiche - Ọla ọlaọcha ọhụụ nke Martech Stack ọ bụla bụ ikike itinye usoro mmụta igwe iji bulie mbọ azụmaahịa. A na-ere ya dị mfe, mana ọ dị mfe. Na-etinye AI chọrọ ndị ọkà mmụta sayensị data na-aghọta otu esi enyocha data, wuru ma nwalee ụdị, kewaa mgbanwe na nsonaazụ, kesaa n'ụzọ dị irè n'ofe netwọk, setịpụ ụkpụrụ mkpebi siri ike, ma chọpụta nnyonye anya na-akpata. Ejiri ọrụ ezighi ezi, AI nwere ike belata ike izi ozi gị ma ọ bụ ka njọ… mee nhọrọ akpaghị aka dabere n'ụdị adịghị mma na osisi mkpebi.
Nzuzo - Data bara ụba. Ndị ụlọ ọrụ na-azụta ma na-ewepụtakwu ya ka ha kee, hazie ha ma mee ka ndị ahịa zụọ ihe. Na esemokwu bụ na ndị na-azụ ahịa anaghị ahụ uru dị na data ha ka ejiri, ree, ma kesaa. A na-emegbu ya site na ndị egwuregwu ọjọọ… na nsonaazụ ya bụ iwu na-egbochi oke ndị na-ere ahịa ike ikwurịta okwu nke ọma na atụmanya na ndị ahịa. Ọrụ dị na ụdị iji jiri nlezianya jiri data, gwa ndị ahịa na atụmanya etu esi eji ya, ebe enwetara ya, na otu esi ehichapụ ya. Ọ bụrụ na anyị anaghị arụ ọrụ n'ime ka mbọ anyị pụta ìhè, gọọmentị ga-na ugbua dị) imebi ikike anyị nwere iji data rụọ ọrụ nke ọma. Ọ bụrụ n ’ị chere na mgbasa ozi adịghị mma juputara ugbu a… chere naanị ruo mgbe ụlọ ọrụ agaghịzi enwe ike ịnweta data.
Security - Data na-enye nsogbu ọzọ… nche. O juru m anya na ọnụ ọgụgụ ụlọ ọrụ na-echekwa data nkeonwe na-enweghị izo ya ezo ma chekwaa ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ekwenyeghi m na ọtụtụ ụlọ ọrụ dị ebe ahụ na-etinye ihe egwu a dị egwu, enwere m mmetụta na anyị ga-ahụ ụdị ahịa ka ha daa n'okpuru iwu na iwu na ikpe na nso nso. N'oge na-adịbeghị anya anyị hụrụ Equifax iji dozie nsogbu ha $ 700. Kedu ihe ị na-eme iji kpuchido ndị ahịa gị na ndị ahịa gị taa? Ọ bụrụ na ị naghị etinye ego na ndị ọkachamara na nchekwa ndị ọzọ na nyocha, ị na-etinye aha njirimara gị na uru ọ ga-enweta n'ọdịnihu n'ihe ize ndụ. Ma ọ bụrụ na ị na-echekwa okwuntughe na mpempe akwụkwọ ma na-ekerịta ha site na email, ị ga-enwe nsogbu. Ikuku management nyiwe na sọrọ Nyocha bụ kwesịrị.
tojupụtara - M na-atụ ụjọ oge ụfọdụ mgbe m nụrụ maka otu narị puku, ma ọ bụ oge ụfọdụ nde dollar, ndị ọkachamara n'ahịa azụmaahịa na-etinye ego na ntinye ego Martech. A na-eme ya n'ihi na a na-ahụ azịza tozuru ebe niile dị ka mma ntinye ego. A sị ka e kwuwe, onye nyocha nke atọ na-akọ nke ọma wee họrọ ụlọ ọrụ ndị a… na-etinye ha na akụkụ aka nri elu. Kedu ihe kpatara na ụlọ ọrụ agaghị etinye ego na teknụzụ nwere ike ịgbanwe mbọ ahịa ahịa dijitalụ ha? E nwere ọtụtụ ihe kpatara ya. Nwere ike ị gaghị enwe ego iji kwaga ma mezie azịza ya. May nwere ike ịnweghị usoro ị ga - esi mezie ihe ngwọta ahụ. May nwere ike ị gaghị enwe mmefu ego iji jikọta ma mezie ihe ngwọta ahụ. Ntụnyere nke m jiri bụ nke a…
Zụta ụlọ ọrụ ụwa Martech Stack dị ka ịzụ ụlọ. Na-azụ ụlọ ahụ, mana ihe anapụtara bụ gwongworo nke osisi, ọkpọkọ, ihe, agba, ibo ụzọ, windo na ihe ọ bụla ọzọ ịchọrọ. Tech natara teknụzụ ụlọ s ọ bụ ugbu a ọrụ gị ka ị ga-esi wuo ya.
Na mgbọrọgwụ anyị dị ka ndị na-ere ahịa dijitalụ, anyị na-anwa ịkọba aha anyị, na-eto ikike anyị n'ime ụlọ ọrụ anyị, ma na-ewulite ntụkwasị obi n'etiti akara anyị na atụmanya anyị na ndị ahịa anyị. Ire ahia bu ihe gbasara mmeko. Dị ka ọ dị taa, teknụzụ enweghị ike dochie mmekọrịta mmadụ na ibe anyị n'etiti ika anyị na ndị ahịa anyị. Nke ahụ nwere ike ịgbanwe n'ọdịnihu… mana ekwetaghị m na anyị ga-ahụ nke ahụ n'oge ndụ m.
Nke a abụghị ihe gbasara post banyere teknụzụ ọjọọ… ọ bụ post gbasara etu esi ere ahịa ahịa, mmegbu, ma ọ bụ atụmanya ikwubiga okwu ókè nke teknụzụ nwere ike imerụ akara ha. Anyị bụ nsogbu, ọ bụghị teknụzụ. Tekinoloji bu ihe nkpuchi na akwa nke anyi kwesiri ka anyi gbalie ike - o bu ihe di oke nkpa nye ndi ahia obula. Mana anyị kwesịrị ịkpachara anya n'iji teknụzụ eme ihe iji hụ na anyị anaghị ebibi ihe niile anyị rụsiri ọrụ ike iji wuo.